I-Romantic Villa ephakathi kwiBhayi yoMlilo kunye neWineglass Bay - I-Airbnb
I-Romantic Villa ephakathi kwiBhayi yoMlilo kunye neWineglass Bay
Olu dweliso lolunye lweSaltwater Sunrise's 5 Luxurious Waterfront Villas. Iivillas ezi-3 zesibini njengoko ziboniswe ngasentla ziphantse zafana kunye ne-50mts ukusuka elwandle kunye nemibono yepanorama. Ibhedi enkulu kunye negumbi lokuhlambela langoku, ishawari yokuhamba-hamba kunye nebhafu esete nzulu. Iikhithi zibandakanya umatshini wokuhlamba izitya, isandwich press, i-microwave/i-oveni/igrill edityanisiweyo, ipani yombane, iketile, itoaster, umatshini weEspresso & neWebberBBQ yangaphandle. Ulawulo lunyula ulwabiwo lwendlu yakho yokwenyani kwiintsuku ezi-2 ngaphambi komhla wokufika ngeSMS okanye nge-imeyile. I-WIFI YAMAHHALA !!!
Le Romantic Villa yakhiwe ngobuchule ukubona iimbono zamanzi amhlophe olwandle, ngokoqobo 50 yeemitha ukusuka kuLwandlekazi lwePasifiki. Inemvakalelo yangoku, isicwangciso esivulekileyo kwaye inikezela ngeembono ezintle kunye nobumfihlo. Ilinen ekhrimkileyo, iitawuli ezimhlophe kunye nezindlu zokuhlambela ezinikezelwe ngeshampu, ijeli yokuhlamba & neshawari, isepha kunye neloshini iyenza ibe likhaya kude nekhaya.
I-kitchenette yenzelwe kuphela ukupheka ukutya okuncinci, nangona kunjalo ifakwe kwi-Oli ye-Olive Olive Eyongeziweyo, iVinegar yeBalsamic, iTyuwa kunye nePepper, iintlobo ze-6 ezahlukeneyo zeTea ye-Organic, i-Chocolate powder, i-tetrapak encinci ye-Full-cream Milk kunye neebhotile ze-2 zaManzi.
I-Absolute Waterfront, i-Private kunye ne-STANDALONE VILLAS, ibekwe kwigadi yemveli eselunxwemeni kwipropathi ye-Waterfront ekhethekileyo yeehektare ezili-10.
Kukho iindawo zokutyela ezimbalwa ezikufutshane ne-15min drive.
Iintsuku eziyi-7 e Falmouth
I-Falmouth yindawo entle yokuphumla kuNxweme oluseMpuma lweTasmania.
Sinechibi elimangalisayo kunye nolwandle olukhethekileyo olukhethekileyo ngokwenene malunga ne-500mtrs ukusuka kwipropati yethu. Kunyanzelekile ukutyelela le meko yaselwandle. Ngamanye amaxesha unokubona amahlengesi, iminenga kunye neentaka ezininzi zolwandle ukusuka kwindawo yakho yokuhlala.
Iivillas zethu zinazo zonke iinkqubo ze-SELF CHECK-IN, ngenxa yoko awuzukudibana nathi buqu. Nangona kunjalo, ukuba uyathanda ukunxibelelana nathi singathanda ukuva kuwe :)
Kungenjalo siya kuninika lonke isithuba sokuba nizonwabele nisebusweni nasekuzimeleni.
Iivillas zethu zinazo zonke iinkqubo ze-SELF CHECK-IN, ngenxa yoko awuzukudibana nathi buqu. Nangona kunjalo, ukuba uyathanda ukunxibelelana na…
Inombolo yomthetho: DA076-02